Lacagta Ma Lagu Celi karaa Kaarka Hadiyadda Fiisaha | Jawaabaha ugu Fiican -
Bogga ugu weyn Lacagta Ma Lagu Celi karaa Kaarka Hadiyadda Fiisaha | Jawaabaha ugu Fiican
Xigasho: Canva Premium
Qof walba wuxuu jecel yahay kaarka hadiyadda ee bilaashka ah! Laakiin, marka ay noqoto kaarka hadiyadda ee la bixiyo, waxaan u janjeeraa inaan su'aalo weydiino. Taasi waa sababta isticmaaleyaal badan ay u weydiiyaan haddii ay heli karaan lacag celin kaararka hadiyadda Visa.
Kaararka hadiyadaha Visa ma aha bilaash. Qadarka ku jira kaarka hadiyadda Visa-ka waxaa horay u go’aamiyay soo-saaraha. Taas macnaheedu waa inaan lagu rari karin lacag dheeraad ah. Marka soo -saaraha go'aamiyo xaddiga ugu badan ee kaarka hadiyadda Visa uu haysto, kuma dari kartid lacag badan kaarka hadiyadda.
Laakiin, markaad wax iibsato oo aad joojiso amarka, waxaad xaq u leedahay in laguu soo celiyo xaalado gaar ah.
Waxaas oo dhan si hoose ayaan u sharraxnay.
Ku saabsan Kaararka Hadiyadaha Visa
Sida laga soo xigtay websaydhka Visa, waxaa jira 7 kaararka hadiyadda.
Waxaad ku isticmaali kartaa kaarka hadiyadda meel kasta oo Visa la aqbalo sida dukaanka, saldhiga gaaska, iyo internetka. Iibsashada waxay ku xiran tahay inta ku qoran kaarkaaga.
Akhri sida loo sameeyo Hel kaararka gaaska ee bilaashka ah Maalmo yar.
Fiiri kaararka hadiyadda fiisaha ee hoose:
Bangiga Ganacsiga: Kani waa hab sahlan oo saaxiibbadaada lagu siin karo kaararka hadiyadda ee ay runtii rabaan. Bangiga ganacsiga, waxaad ka dalban kartaa wariye kasta ama internetka.
Giftcards.com: Mid ka mid ah waxyaabaha gaarka ah ee giftcards.com ayaa ah inaad abuuri karto kaarar shaqsiyeed. Waxaad u baahan tahay oo kaliya inaad sawir geliso oo aad sameysato kaar hadiyad oo shaqsiyeed kaas oo lagu cabbo 24 saac gudahood.
Mall Card Card: Giftcardmall, waxaad ku qeexi kartaa/naqshadayn kartaa kaarkaaga hadiyadda ama ka dooran kartaa naqshadaha iyo qaab -dhismeedyadii horeba loo heli jiray.
GiftCardGranny.com: Ku dhis kaadhadhka hadiyadaha sawirkaaga, habayso farriinta kuna raaxayso bixinta isla maalintaas
Ciidanka Badda ee Federaalka: Visa waxay taageertaa kaararka hadiyadeed ee xubnaha Navy Union Credit Credit Federal. Waxaad u adeegsan doontaa kaarkaaga Visa -ga ee Federal Navy si aad u iibsato kaarka hadiyadda.
PerfectGift.com: Kaararka hadiyadda ee Perfectgift waxaa lagu daabacay gudaha. Sidaa darteed, waxaad ku diri kartaa sawir si loogu daabaco kaarka ama xitaa astaantaada macaamiisha shirkadaha. Kaararka hadiyaddooda waxaa la raraa isla maalintaas.
Kaarka Hadiyadda Vanilla Visa. Asal ahaan, waad iibsan kartaa naqshado ama abuuri kartaa kaarkaaga hadiyadda ee caadada ah adoo ku daraya sawir ama astaan.
Sideen U Heli Karaa Dheelitirka Kaarka Hadiyadayda Fiisaha?
Ogaanshaha sida loo hubiyo dheelitirka kaarka hadiyadda fiisaha waa lama huraan. Kaliya ma ogaan doontid inta ku hartay kaarkaaga, laakiin sidoo kale waxaad awoodi doontaa inaad aqoonsato marka kaarka hadiyadda fiisaha dib loo soo celiyay.
Sidaad gadaal arki doontaan, mid ka mid ah su'aalaha uu weydiiyo qofka haysta kaarka hadiyadda fiisaha ayaa ah sida loo ogaado in kaarkiisii ​​la soo celiyay ka dib markii uu codsaday lacag celin. Taasi waxay had iyo jeer muujinaysaa inuusan garanayn sida loo hubiyo dheelitirka.
Sababtaas awgeed, waxaan tixgelin doonaa sida loo hubiyo dheelitirka kaarka hadiyadda fiisaha.
Ka bilow inaad fiiriso gadaasha kaarkaaga hadiyadda, waxaad heli doontaa lambar lacag la'aan ah oo soo wici kara si aad u ogaato dheelitirka.
Sidoo kale, waxaad iska hubin kartaa dheelitirkaaga adigoo booqanaya websaydhka bixiyaha kaarka oo geli kaarka lambarka 16 -ka lambar iyo lambarka amniga.
Waxaad caadi ahaan ka hubin kartaa dheelitirkaaga onlaynka kuwa bixiya kaarka hadiyadda fiisaha:
Kaararka Hadiyadaha Visa Vanilla
Mall Card Card
Ciidamada Badda Federalka
Akhri: Sida Loo Helo Kaararka Hadiyadda Amazon ee Lacag La'aanta ah: 24 Tricks si Loogu Kaco…
Lacag ma lagu soo celin karaa kaarka hadiyadda Visa?
Jawaabta fudud waa haa, way awoodaa!
Iibsasho kasta oo lagu sameeyo kaarka hadiyadda fiisaha oo la joojiyo ka hor intaan badeecaddu dhicin la keenay (haddii ay u baahan tahay dhoofinta) waa la soo celin karaa.
Si kastaba ha ahaatee, tani kaliya waxay dhacdaa marka badeecada ama gadashada waxay leedahay siyaasad lacag celin ah.
Sidaa darteed, waxaa muhiim ah in la hubiyo haddii badeecad kasta oo aad iibsaneyso ay leedahay siyaasad lacag celin ah oo ku lifaaqan.
Sidoo kale, soo celinta waxay ku jirtaa kaarkaaga hadiyadda fiisaha waxayna kordhisaa dheelitirkaaga.
Sideen Ugu Laaban Karaa Kaarka Hadiyadda Visa?
Si aad lacag ugu soo celiso kaarkaaga hadiyadda fiisaha ama iibsasho kasta, waxaad u baahan doontaa kaarka Gift Visa.
Ganacsadaha maamuli doona macaamilka soo noqoshada wuxuu u baahan doonaa faahfaahinta kaarka fiisaha taasina waxay keenaysaa inaad haysato kaarka.
Sidaa darteed, waxaad u baahan tahay inaad ku haysato kaarkaaga hadiyadda fiisaha oo aad ku xafiddo maxaa yeelay soo noqoshada kasta oo lagu iibsado kaarka waxay u baahan doontaa kaarka dhabta ah si loo xaqiijiyo macaamil ganacsi.
Mudo intee leeg ayay qaadataa in lagu soo celiyo Kaarka Hadiyadda Visa?
Hore, waxaan uga jawaabnay su'aasha, lacag ma noqon kartaa dib loo soo celiyay kaarka hadiyadda fiisaha. Hore u socoshada, waxaad u baahan tahay inaad ogaato muddada ay qaadanayso in lacagta laguu soo celiyo si aad u gasho dheelitirka kaarka hadiyadda fiisaha.
Dhab ahaantii, haddii wanaagga ama adeegga aad ku iibsatay kaarka hadiyadda fiisaha uu xaq u leeyahay lacag -celin, oo aad oggolaato inaad aqbasho deynta dheelitirka kaarka beddel lacag caddaan ah, deyntu waxay ka tarjumaysaa 30 maalmood gudahood.
Asal ahaan, waxay qaadataa 30 maalmood in lagu helo soo -celinta deynta kaarka hadiyadda fiisaha ka dib soo celinta iibsiga.
Lacag -celinta ayaa laga yaabaa inay dhakhso u timaaddo 30 maalmood, laakiin waqtiga ayaa sida caadiga ah lagu xidhaa 30 maalmood.
Lacagta Ma Lagu Celi karaa Kaarka Hadiyadda Fiisaha | Su'aasha ka timid Isticmaalayaasha
Kuwani waa su'aalo ay weydiiyaan dadka isticmaala kaarka hadiyadda fiisaha. Jawaabaha iyaga ayaa sidoo kale laga soo xulay liiska ay ka jawaabeen dadka isticmaala kaarka hadiyadda. Annagu ma aannu weydiin su'aalaha, manaanu ka jawaabin.
Su'aasha # 1
Waxaan ku iibsaday kaarka Vanilla Visa Gift $ 400 waxaana ku xiray koontadayda lacag bixinta. Wax baan ku bixiyay lacagtaas, laakiin waan baajiyay, sidaas darteed waxaan helay lacag celin. Lacag -bixiyaha, waxay igu leedahay waxaa la ii soo celiyay $ 400, laakiin waxaan hubiyay dheelitirka kaarkayga hadiyad oo waxaan haystaa $ 0. Hawlgallada, waxay ku leedahay 400 oo doollar calaamadda “-” waxaana ku qoran “Sugitaan-KAARAYNTA BIXINTA”. Mudo intee leeg ayay qaadataa in lagu muujiyo kaarkayga ??
Haa. Waxaan isticmaalayay kaararkan sanado. Lacagta dib ayaa loogu celin karaa kaarka hadiyadda Visa. Kaararkani caadi ahaan waa kuwo aan dib loo raran karin, laakiin dib uma raraysid. Waxaad soo celinaysaa lacagtii asalka ahayd ee ku jirtay kaarka. Sababaha kaliya ee sababta aadan u awoodi doonin inaad tan samayso waxay noqon doontaa haddii kaarku dhacay (kii aan lahaa 6 bilood ka dib oo lambarku aanu sii shaqaynayn) ama haddii iibsiga ka dib aad tuurtay kaarka . Xaaladdan oo kale waxaad u badan tahay inaad hesho sumcad dukaan. Si kastaba ha ahaatee, waxaan ahay qof aan kala sooc lahayn internetka. Jawaabtaada ugu fiican waxay ka imaan doontaa adeegga macmiilka ee Kaarka Hadiyadda Visa.
Su'aasha # 2
Waxaan dhawaan wax ku iibsaday eBay oo aan imaan. Waxaan u isticmaalay kaarka Lacag -bixinta Visa si aan u iibsado oo dib ayaa laygu soo celiyay. Miisaaniyaduhu wali ma ku noqon doonaan kaarka hadiyadda? Kaarku wuxuu si gaar ah u sheegayaa in aan dib loo rari karin waxaanan isku dayay inaan ka fiiriyo dheelitirka khadka tooska ah mana heli karo hab aan sidaas ku sameeyo.
Jawaab: Haa, lacagtu waxay ku noqon doontaa kaarka. Kaarka gadaashiisa waxaa ku yaal mareeg ama lambar taleefan oo aad isticmaali karto si aad u hubiso dheelitirka.
Hoos ka akhriso: Sida Loo Helo Kaararka Hadiyadaha Lacag La'aanta Ah Iyadoo Aan La Dhamaystirin Soo -jeedintas
Lacagta waxaa lagu soo celin karaa kaarka hadiyadda fiisaha oo kaliya sida dheelitirka deynta ee kaarka. Haddii aad doorbidi lahayd inaad kaash ahaan ahaan lahayd, ma noqon karto sidaas. Waxaad ka arki kartaa tan su'aasha ugu horreysa oo uu weydiiyay isticmaale.
Si kastaba ha noqotee, ka hor intaadan codsan soo -celin, hubso in badeecadu leedahay siyaasad lacag -celin ah oo ku lifaaqan.
Oo dulqaado maaddaama lacag -celinta laga yaabo inay timaaddo 30 maalmood gudahood.
Waxaa muhiim ah in la ogaado in kaarka Gift Visa aan dib loogu rari karin lacag dheeraad ah. Waxaad isticmaali kartaa oo kaliya kaarka horay loo sii bixiyay ee Visa haddii aad rabto inaad haysato kaar dib loo raran karo.
Sidoo kale, bixiyaha kaarka hadiyadda ayaa go’aamiya lacagta ugu badan ee kaarka Hadiyadda Visa uu qaban karo.
Sida Loo Helo Kaararka Hadiyadaha Lacag La'aanta Ah Iyadoo Aan La Dhamaystirin Dalabyada
10 Madal ee Kaarka Hadiyadeed ee Legit iyo Sida Loogu Guuleysto 2021
15 Siyaabood Oo Loogu Heli Karo Kaararka Hadiyadaha iTunes Si Xalaal Ah Sanadka 2021
Barnaamijyada Qiimaha Gaaska Jaban ee 2021 | loogu talagalay adeegsadayaasha Android iyo iPhone
Faallooyinka Lenda Mortgage 2021: Sida ay u Shaqayso | Ma Xalaal Baa Mise Waa Khiyaamo Cusub Oo Daynta Ah
20 Podcasts oo ah Maalgelinta ugu Fiican ee Bilowga ah 2021
5 Hacks oo ku saabsan sida loo iibiyo gabayada Etsy sanadka 2022 | Tilmaan Buuxo
Caqabadda ugu weyn ee abwaannada badankoodu la kulmaan waxa ka mid ah in ay helaan meesha ugu habboon ee ay suugaantooda ku iibin karaan. Etsy…
Ku iibso PC-yada Ciyaaraha ugu Fiican Miisaaniyadaada Hadda
Ciyaartu waxay noqon kartaa mid qaali ah markaad isku darto dinaar kasta oo la kharash gareeyo muddada dheer. Iibsashada khalad…
Ripple waa teknolojiyad maaliyadeed oo u shaqaysa sidii cryptocurrency iyo shabakad lacag bixin dijitaal ah. Waxay ahayd…
10 -Ka Lacag -Dhegaha Ee Dunida Ugu Qaalisan
Taleefannada dhegaha la gashado waxa ay wanaajiyaan tayada codadka iyo mar kasta oo ay qaali yihiin, codkana waa ka sii fiicnaanayaa. Maqaalkan…